War - Maxaan u fiirsanaa garbaheena?
Maxaan u fiirsanaa garbaheena?
Qoorta laf-dhabarku waa xubin muhiim u ah dhaqdhaqaaqa jirka bina-aadamka. Si dhib leh ayaan u shaqeyn karnaa oo u nasan karnaa la'aanteena maalin kasta. Maaddaama uu yahay mid ka mid ah kala-goysyada muhiimka ah ee jidhka bini'aadamka, garabka ayaa had iyo jeer dhaqaaqa Caafimaadkiisu wuxuu si toos ah u go'aamiyaa tayada nolosha iyo tayada nolosha qofka. Isticmaalka wanaagsanGarabka Garabkailaalin kara oo dardargelin kara soo kabashada. Waxay faa'iido u leedahay garabka caafimaadka.
Garabka Garabkailaaliyaha ayaa si ballaaran loo isticmaalaa. Waxaan badanaa arki karnaa dadka waayeelka ah, ciyaartooydu waxay adeegsadaan garabka garabka, iyo noocyada kala duwan ee bukaanka garabka, gaar ahaan rheumatoid arthritis-ka iyo bukaan-jiifka afka ilmagaleenka sidoo kale waxay u baahan yihiin garabka ilaaliya si loo ilaaliyo kala-goysyada.
Garabka garabka ayaa ku siin kara taageero, xasilooni, ilaalinta kuleylka iyo xanuun joojinta unugyada ku xeeran ee wadajirka garabka. Waxay ku habboon tahay xanuun daran iyo dabadheeraad ah iyo caabuq ay sababaan nabarro xumaada oo ka yimaada garabka wadajirka ah iyo dhaawaca unug jilicsan, iyo garabka subluxation ee ay keento hemiplegia. Waxay ku siin kartaa taageero, xasillooni, ilaalinta kuleylka iyo xanuun joojinta unugyada ku hareeraysan ee wadajirka garabka. Waxay ku habboon tahay xanuun daran iyo dabadheeraad ah iyo caabuq ay sababaan nabarro xumaada oo ka yimaada garabka wadajirka ah iyo dhaawaca unug jilicsan, iyo garabka subluxation ee ay keento hemiplegia. Kaliya uma baahnin taageerada garabka si aan u kululaanno xilliga jiilaalka, laakiin bukaanadan, dhab ahaantii, xagaaga dhididka ah, sababtoo ah helitaanka joogtada ah ee jawiga hawo-qaboojinta, waxaan sidoo kale u baahannahay garabka garabka ku habboon si loo yareeyo culeyska wadajirka ah. Badanaa, qalabka loo isticmaalo taageerada garabka suuqa waa cudbi, dhogor, maqaar iyo walxo isku dhafan. Suuf: waa la neefsan karaa oo la isbadali karaa, laakiin way fududahay in la duudduubto ka dib marka la maydho oo la xidho. Qiyaasta yaraanshaha ayaa ah mid aad u ballaaran, qiyaastii 4-10%. Ilaalinta kuleylka waa guud, ma adkeysanayo caaryada. Dhogor: Dharka dhogorta guud ee garbaha ka samaysan maaddada waa dhogor, timo bakayle iyo timo geel, iwm. Waxay leedahay haynta diirimaadka sare, laakiin hawadeeda ayaa qaloocota. Kuma haboona in wax la qaybiyo dhidid ka dib, oo hantideeda cayayaanka aan caddayn ayaa liita. Waxay kaloo dadka siisaa dareen duug ah oo qallalan kadib markay isticmaalaan muddo. Maqaarka: Maqaarka xayawaanku waa ka neefsasho badan yahay, diirran yahay, laakiin biyaha u adkeysan kara; dusha sare ee maqaarka macmalka ahi kama cabsanayo qoyaanka, laakiin wuxuu ku liitaa kuleylka iyo soo-gudbinta hawada.
Waqtiga boostada: Nofeembar-19-2020